PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-01 - Imhlinzele ezibini ingoduso yakhe ilotsholwa okwesibili
Imhlinzele ezibini ingoduso yakhe ilotsholwa okwesibili
Isolezwe ngeSonto - 2017-01-01 - IZINDABA -
IKHALA iyazithulisa indoda yase-Estcourt ethole ukuthi ingoduso yayo ebese kusele ukuthi ishade nayo ilotsholiwe okwesibili.
UMnuz Musa Mahlinza oshayela amatekisi asuka eMtshezi aye eGoli uthe wethuke koma amathe ngesikhathi eye ekhweni lakhe wafike wazithela kubakhongi ebebezolobola ingoduso yakhe uNksz Zamahlubi Hadebe.
Uthe uNksz Hadebe obelotsholwa ngoMsombuluko ubenesonto elilodwa egcine ukumbona kodwa bebefonelana.
“Ngemuva kokumlobola ngahambisa nomembeso sibe sesihlala sobabili emqashweni kusukela nyakenye. Ngisola ukuthi uqale ukuba neshende sisahlala ndawonye ngoba mina bengibuye ngiye eGoli. Indaba iqale ngokuthi kube nengxabano sibanga ukuthi ngifuna ukuthatha isithembu okuyinto engangivele ngimtshele yona ngaphambi kokuthi ngimlobole, wavele waduba wahamba wayoqasha wangishiya ngedwa,” kusho yena.
Uqhube wathi noma sebexolelene uNksz Hadebe akazange esabuyela emqashweni wabo kodwa ubefika nezingubo zakhe engazithathanga.
“NgoMsombuluko ngifikelwe ukuthi ngiyombheka ngoba bese kunesonto ngingamboni. Ngiqale ngafona wangalubamba ucingo ngoba bese ngiseduze ngasale sengiya kanti ngizozithela kule nkilayitheka yokuthi uyalotsholwa,”
UNksz Hadebe efonelwa uthe: “Ufona ukuphi? Nkosiyami! Kanti uMusa ungifunani? Ubeqinisile ngempela mayethi ufuna ukungifundisa abantu, akenelanga ukungihlekisa ngabantu endaweni manje usefuna kwazi umhlaba wonke.”
UNksz Hadebe uthe waphuma emqashweni abebehlala kuwo noMahlinza ngoJulayi nyakenye waqoma ngoDisemba ngoba uMahlinza ubengasamnakile.
“Ngaphuphunyelwa yisisu ngahlala isonto esibhedlela uma ngibuya wayeseqonywe yizintombi ezintathu. Wathi ubenzela ukuthi abe nomuntu ozomwashela,” kusho uNksz Hadebe.
Uthe eyodwa kulezi zintombi ibilwa naye futhi noMahlinza kubonakala ukuthi uyayithanda engafuni ukwehlukana nayo.
“Kwehlukeka sengithi akakhethe oyedwa phakathi kwethu wathi ngeke akhethe. Uma ngibuza ukuthi mina ngenzenjani wathi angenze engikubonayo. Yikho-ke ngaziqomela,” usho kanje.
Uthe besingekho isidingo sokuthi amtshele ukuthi uyalotsholwa ngoba imali ayeyikhokhile izophenduka izothathwa kube eyenhlawulo.
“Umembeso awuletha wawungaphelele kwakwenzelwa ukuthi abasekhaya bakwazi ukuya kubo uma kushoniwe. Imindeni yavumelana ngokuthi kwembeswe abakhwekazi kuphela manje leyo nto usengayibiza ngomembeso.
“Uma efuna izinkomo zakhe akeze kubalwe kubonakale ukuthi ikhona yini imali ezosala. Uma ikhona uzoyithola,” kusho uNksz Hadebe ehleka.